MS Dhoni wanted to tour Zimbabwe, help youngsters: Sandeep Patil - myKhel
» MS Dhoni wanted to tour Zimbabwe, help youngsters: Sandeep Patil
Mumbai, May 23: All-India cricket senior selection committee chairman Sandeep Patil on Tuesday said India's limited overs skipper Mahendra Singh Dhoni wanted to lead a new-look side for the Zimbabwe tour starting from June 11 and help the youngsters.
"Zimbabwe tour is looked as specially for the youngsters to try and test them. The young team which has been sent should give their best and perform. Nothing better opportunity than this. They will get ample experience from this. Dhoni himself wanted to tour Zimbabwe and help the youngsters," Patil said at a press conference here after announcing the squads for both tours.
(India-Zimbabwe tour schedule)
"We wanted variations in our bowling so Axar, Chahal, Yadav have found a place in the side. BCCI tournaments are very competitive and will be an exciting one for sure," he said.
When asked about why Mumbai batsman Shreyas Iyer was ignored for the Zimbabwe tour despite scoring more than 1000 runs during the domestic season, the selection committee chief said that the right-handed batsman's name came up but it was difficult to fit in all the players in a 15-16 member squad.
Read more about: cricket team india zimbabwe west indies india tour of zimbabwe 2016 ms dhoni virat kohli suresh raina
Story first published: Monday, May 23, 2016, 16:48 [IST]